Oge Triassic: njirimara, geology, ihu igwe, flora na fauna | Network Meteorology
N'ime oge nke Mesozoic anyị nwere ọtụtụ oge nke ekewara nke a geological oge. Taa, anyị ga-ekwu maka ya Triassic. Ọ bụ nkewa nke usoro mbara ala nke oge atọ ndị a nke ekebara Mesozoic. Ọ malitere ihe dịka 251 nde afọ gara aga wee kwụsị ihe dịka 199 nde afọ gara aga. Startbọchị mmalite na njedebe a abụghị nke ziri ezi mana ejiri akara site na nyocha ala na ihe akara ya. Na nke a anyị na-ahụ otutu mkpochapu nke PermianTriassic na Triassic-Jurassic Nchịkọta.
N’isiokwu a anyị ga-elekwasị anya na ịkọwapụta njirimara niile, bayoloji na ihu igwe nke Triassic.
2 Gearis Triasic
3 Ọnọdụ ihu igwe
Ihe kachasị n'oge a bụ ọdịdị nke dinosaurs mbụ. Anụmanụ ndị a nọchiri anya n'ụdị nwere ụkwụ abụọ, nri na-eri anụ zuru oke, na obere pere mpe. Otú ọ dị, site na njedebe nke Triassic ha enwetalarị nnukwu ọnụọgụ dị iche iche ee ee, ha abụrụla akụkụ kachasị na mbara ụwa niile. Mgbatị nke dinosaurs bịara na mkpochapụ nke ìgwè ndị ọzọ nke anụmanụ ndị gara aga dịka archosaurs oge ochie na ọtụtụ anụ na-akpụ akpụ nke gbasaa n'oge a.
N’oge a, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ala nile nke ụwa anyị agbakọtara n'otu kọntinent a na-akpọ Pangea. Kọntinent a nwere ọdịdị C yana n’ebe ọwụwa anyanwụ bụ Osimiri Tethys ma gbaa ya gburugburu bụ Panthalassa Ocean. A na-ahụta oke osimiri a dịka oke osimiri ụwa ebe ọ bụ na ọ kpuchiri ụwa niile.
N’oge a enwere ọtụtụ mmiri mmiri n’oké osimiri ahụ edebere n’oge a na-apụ n’anya site na mwepu nke efere oke osimiri site na mmegharị nke mmiri iyi nke causedwa. Nke a bụ ihe kpatara na amaghị ọtụtụ ihe banyere oke osimiri ma ọ bụ n'oge Triassic.
Pangea kọntinent bidoro iwepụ ya n'oge a ọkachasị n'oge ngwụcha Triassic. Ma na oge a bụ E kewara ya na oge atọ a maara dị ka Lower Triassic, Middle Triassic, na Upper Triassic. Nke a bụ otu Laurasia na Gondwana kewara nnukwu kọntinent ahụ. Akụkụ nke mbụ ghọtara mpaghara Asia niile, North America na Europe. Akụkụ nke abụọ nke nnukwu mba ndị mejupụtara Africa, Arabia, India, Australia, Antarctica, na South America.
Nnukwu ala ahụ na-eji nwayọ nwayọ na-aga n'ebe ugwu n'oge Triassic. Nke a bụ ebe nnukwu mba ụwa bidoro igosi ihe izizi nkewa nkewa abụọ n'akụkụ abụọ. Ihe mbu nke enwere ike ichota n'èzí bu ihe kpatara nkewa nke kpatara ihe nkewa mbu nke mba di iche iche. Esemokwu a bụ nke kpatara mbibi mbụ nke Pangea na nke nwere ike ikewapụ ihe taa anyị maara dị ka New Jersey na Morocco.
N’oge a, oke osimiri rịrị elu ntakịrị agbanyeghị na mpịakọta nke mpaghara ndị ahụ pụta ka dị elu. Ma ọ bụ na oke osimiri Tethys guzobere olulu sara mbara nke na-aghọ ụzọ mbuso agha mmiri.
Ihu igwe n'oge a na-adịkarị ọkụ ma na-akọrọ. Ọnọdụ okpomọkụ ndị a dị elu bụ ihe kpatara mbido na ndọtị nke ọzara na evaporites. Ebe ọ bụ na Pangea buru ibu, oke nsogbu nke oke osimiri nwere oke njedebe. Ma ọ bụ na oké osimiri na-arụ ọrụ dị ka onye nduzi nke okpomọkụ zuru ụwa ọnụ. Yabụ, n'ime ime obodo enwere ike ịnwe mgbanwe mgbanwe mberede buru ibu na ọnọdụ okpomọkụ ebe ọ bụ na nso mmiri adịghị nso nke nwere ike ijikwa ọnọdụ okpomọkụ ahụ n'ihi ọrụ nke ebili mmiri.
Ọnọdụ ihu igwe nke ụwa bụ oge a na-enwe ezigbo oge ọkọchị na udu mmiri dị oke oyi. Ebe ọ bụ na oké osimiri enweghị ike ịrụ ọrụ dị ka ihe na-achịkwa ọkụ, e nwere oke ọnọdụ okpomọkụ dị oke egwu n'oge abụọ nke afọ. Eleghị anya oge mmiri siri ike dị na mpaghara Ecuador n'agbanyeghị na enweghị ihe akaebe nke glaciation dị nso ma ọ bụ na otu mkpara. N'ezie, n'ime oge a, mpaghara ndị dị na Polar bụ ala mmiri na ihu igwe dị mma. Ọnọdụ ihu igwe a zuru oke iji nwee ike ịzụlite ihe niile yiri anụ ahụ yiri ọbara nke ọbara ya dị oyi.
Dị ka anyị kwuburu, mmiri oké osimiri dịtụ obere n'oge Lower Triassic. Na ngwụcha nke oge a, e nwere mkpochapu nke ndị conodonts na placodont reptiles nwụrụ. Na mbibi a 20% nke anụmanụ mmiri furu efu ọ bụ ezie na otu ndị a nwere ike iweghachite n'oge oge Jurassic. Ihe ka ọtụtụ n'ime ndị nwụrụ anwụ n'ihi mgbasa nke dinosaurs bụ agbụrụ nke anụ na-eri anụ na nnukwu amphibians.
Dika aturu anya na okike, enwere umu anumanu na osisi ndi kachasi rita uru site na mkpochapu umu ndi ozo ebe obu na ihe nile puru ibu ndi na-eri ibe ha. Ọ bụrụ na ha enweghị ndị na-eri ibe ha, ọnụ ọgụgụ ha nwere ike ito ngwa ngwa. Ndị a ritere uru na mkpochapụ n'ụwa bụ dinosaurs na-abawanye ngwa ngwa, nke kachasị n'oge oge Jurassic, na-achịkwa ebe obibi ụwa na oge Mesozoic.
Naanị anụ ndị na-akpụ akpụ nwere ike ịlanarị mgbasa nke dinosaurs bụ ichthyosaurs na plesiosaurs. Ihe omumu sayensi n’egosi na otutu nchupucha di na Triassic. Otu bụ na mmalite oge na onye ọzọ na njedebe. Oge ihe mkpochapu ndia nile di na oke nke sayensi amachaghi ma enwere ihe ndi kpatara Triassic ikpochapu nke amaghi.
Otu n’ime isi ọmụmụ emere na northwest Arizona na 2002 enweghị ike igosi mgbanwe mberede na gburugburu ebe obibi ma ọ bụ ọnọdụ okpomọkụ, yabụ enwere ike iwepụ kpamkpam ihe kpatara oke mkpochapu igwe. N'oge ndị a conifers na ndị ọzọ dị ka mgbatị ahụ bụ ndị dochiri ahịhịa nke ahịhịa na mkpụrụ ndị gbasara ma gbasasịa ebe obibi ndị dị larịị n'oge ndị a.
Enwere m olileanya na site na ozi a ị nwere ike ịmụtakwu banyere oge Triassic.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Ciencia » Oge Triassic
Na-akpali nnọọ mmasị. Gini mere i ji kwuo na Triassic n'oké osimiri enweghi ike ịrụ ọrụ dị ka ihe na-achịkwa ọkụ?